Proclaiming the Word - Mijery an’I Jesosy Kristy Tompo | Outlines of Messages
Mijery an’I Jesosy Kristy Tompo
Mijery an’I Jesosy Tompon’ny finoantsika sy Mpanefa azy, Izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, dia dia efa mipetraka eo amin’ny ankavanan’ny seza fiandrianan’Andrimanitra Izy.
Fa hevero tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon’ny mpanota taminy, fandrao ho ketraka hianareo ka ho reraka ny fanahinareo.”
Hebreo 12, 2-3
Raha tsy mametraka ny laharampahamehana eo amin’ny fiainantsika isika dia ny olona na ny zava-misy manodidina antsika no nibaiko antsika. Rehefa mitranga izany dia tonga ny alahelo sy ny olana maro samihafa.
1. Nahafantatra ny antom-pisiany ny Tompo Jesosy
Hoy I Jesosy taminy, anio no tonga eto amin’ity trano ity, ny famonjena, fa izy dia zanak’I Abrahama koa, Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very.”
Lioka 19, 10
Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino Azy dia tsy helohina fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran’ny Zanaka Lahitokan’Andriamanitra izy.” Jaona 3, 17-18
Ao amin’ny Filazantsaran’I Lioka 15, 1-11 dia miresaka zavatra izay very:
Ny zanakondry dia very noho ny antony mahazatra andavanandro.
Ny farantsakely dia very tampoka.
Ilay zanaka adala dia very noho ny zavatra niniana natao.
Alohan’ny hametrahantsika ny laharampahamehana dia mila mahafantatra ny antompisiantsika aloha isika.
2. Nemetraka ny laharampahamehany izay mifototra amin’ny antompisiany ny Tompo Jesosy
Ny firaisany amin’ny Rainy.
“Ary nifoha maraina alina koa Izy, dia nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tany. Ary dia nandeha nitady Azy Simona sy ny namany. Ary nahita Azy izy, dia nanao taminy hoe: Ny olona rehetra mitady Anao. Fa hoy kosa Izy taminy: Andeha isika hiala hankany amin’ny tanàna akaiky, mba hitoriako teny any koa: fa izany no nahatongavako.”
(Marka 1, 35-38).
“Ary Jesosy sy ny mpianany dia teny an-dàlana niakatra ho any Jerosalema, ary Jesosy nandeha teo anoloany: dia gaga ny mpianany ary izay nanaraka Azy dia natahotra. Ary naka ny roambin’ny folo Lahy indray Izy, dia nilaza taminy izay efa hanjo Azy.”
(Marka 10, 32).
Famonjena izay very.
“Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” Lioka 19, 10
3. Miaro ny laharampahamehany amin’ny fandaharam-potoanan’ny olona Izy.
Hatramin’izany no vao natoron’I Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hankany Jerosalema Izy ka hampijalian’ny Loholona sy ny lohan’ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna dia hovonoina , ary hatsangana amin’ny andro fahatelo.
Ary Petera nanohina Azy hitanila kely ka niteny mafy Azy hoe: Sanatria aminao izany, Tompoko Tsy ho aminao tokoa izany:
Fa Izy nihodina ka niteny tamin’I Petera hoe! Mankanesa ato ivohoko, ry Satana: fahatafintohina (sakana) amiko ianao, satria tsy misaina izay an’Andriamanitra ianao, fa izay an’ny olona.” ( Matio 16, 21-23).
1. Mahafantatra ny antompisiany Jesosy !
2. Mametraka ny laharam-pahamehany Izy izay mifototra amin’ny antompisiany
3. Miaro ny laharampahamehany amin’ny fandaram-potoan’ny olona Izy.
Andao hijery an’I Jesosy isika!